सन्निले नराम्रो नजरबाट यसरी जोगाईन् किसानको बाली - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»सन्निले नराम्रो नजरबाट यसरी जोगाईन् किसानको बाली
By रिता घिसिंग on २ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:५३ रोचक खबर
सन्नी लियोनी भन्न साथ तपाईंइको मनमा के के कुरा खेल्छन् ? सन्नी लियोनीको बारे एउटा यस्तो अचम्मको कुरा खुलासा भनेको छ कि तपाईंलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ ।
भारतको आन्ध्रप्रदेशको निलोरे जिल्लाको कुराहो , त्यहाँ त सन्नी नियोनीको पोष्टर राखेरै एक किसानले बाली जोगाउन सफल भएका छन् ।
बन्दा किन्नी पिल्ले गाउँका ४५ वर्षे छेन्चु रेड्डीले लगाएको काउली र बन्दा लगायतका तरकारी उनका छिमेकीहरुले देखेर हैरान पारे । उनीमाथि आँखा पनि लगाए । गाउँलेहरुको तरकारीमा परेको गिद्धे दृष्टि हटाउन रेड्डीले उपाय रचे । त्यो उपायले चामत्कारिक काम गरेको छ । उपाय हो पूर्व अश्लील चलचित्रकी नायिका सन्नी लियोनीको ग्ल्यामर तस्वीर । ठूलो बोर्डमा लियोनीको बिकिनी लगाएको तस्वीर रेड्डीले तरकारी बारीको छेउमा राखेका छन् । त्यसमा उनले तेलुगु भाषामा ‘ए ! ममाथि आरिस नगर ’ भनेर लेखिएको छ ।
यो तरिकाले ती गाउँलेहरुको ध्यान सन्नी लियोनीतिर जाने र खेतीबाली कसैले नहेर्ने रेड्डीको तर्क छ । भारतमा अन्धविश्वास कायमै छ । मानिसले अन्न हेरे कुहिन सक्छ भन्ने अन्धविश्वासमा परेका रेड्डीलाई यसपटक बाली राम्रो भएकोमा सन्तोष लागेको छ ।
रेड्डीलाई त्यस्तो तस्वीर राख्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने कानुनी कुरा केही थाहा नभए पनि उनको सन्तोष खोज्ने उपाय भने गज्जबको छ । रेड्डी आफैले भनेका छन्, ‘कोही अधिकारी वा पुलिस आएर मलाई कुनै समस्या दिएका छैनन् ।’ उनलाई लागेको छ ‘उनीहरुले किन अवरोध गर्ने ?’